Ezigbo Ezigbo Ezinụlọ - WRSP
EZIOKWU EZIOKWU EZINỤLỌ MOSES
1947 (May 16): A mụrụ Roch Thériault n'obodo nta nke Rivière-du-Moulin, Quebec ma zụlite ya na Thetford Mines, Quebec.
1965: Theriault jụrụ ịzụlite Katọlik mgbe ọ dị afọ iri na asatọ ma kwe nkwa ịchọta ụzọ nke mmụọ ya.
1967 (November 11): Thériault lụrụ Francine Grenier. Di na nwunye ahụ nwere ụmụ nwoke abụọ: Roch-Sylvain, a mụrụ na Jenụwarị 1969, na François, a mụrụ na Eprel 1971. Na 1974, Grenier ga-achọ ịgba alụkwaghịm.
1975 (February): Thériault rụrụ ọrụ dị ka onye na-arụ ọrụ n'ụlọ ọrụ na ọkwá nkà wee zute nwunye ya n'ọdịnihu, Gisèle Lafrance, na Quebec City.
1977 (Jenụwarị): Thériault sonyeere Chọọchị Seventh-Day Adventist (SDA) na Thetford Mines.
1977 (February): Thériault natara ọhụụ na-ebu amụma banyere mgbukpọ nke Jonestown.
1977 (May): Thériault malitere ire akwụkwọ maka ịrụ ọrụ Chọọchị Adventist nke ụbọchị asaa ma kụzie usoro ịga nke ọma na nke ọma na "detoxification" (na otu esi akwụsị ị smokingụ sịga) na Thetford Mines na obodo ndị gbara ya gburugburu.
1977 (May - July): Thériault dọtara ndị na-eso ụzọ ise na ihe omume SDA, ma kpọọ ha ka ha kwaga n'ime ụlọ ya na Lafrance. Ha malitere ịkpọ di na nwunye mere agadi “Papy” na “Mamy.”
1977: Thériault na Francine Grenier kwubiri ịgba alụkwaghịm ha.
1977 (Septemba): Thériault na ndị òtù ya gara Sainte-Marie-de-Beauce, ebe ha zutere Jacques Giguère na nwunye ya, Maryse Grenier, ndị sonyeere ndị otu Thériault. Jacques Giguere ghọrọ nwoke aka nri nke Thériault.
1977 (Septemba): Ndị nne na nna nke afọ iri na ụma, Chantal Labrie, nwere nchegbu na ọ dara idebanye aha na kọleji mgbe ọ kwagara n'ụlọ Theriault-Lafrance, siri ọnwụ na ọ ga-anwale ule uche. The ọkà n'akparamàgwà mmadụ kọrọ na ọ nọ na ezi uche ọgụgụ isi.
1977 (October): Ndị otu ahụ kwagara Sainte-Marie-de-Beauce wee guzobe otu ụlọ ahịa Clinique vivre en health ("Ụlọ Ahụike Dị Mma"). Ha nọgidere na-enye ọzụzụ mmezi na ọtụtụ obodo ndị dị n'akụkụ Province nke Quebec.
1977 (Fall): Thériault malitere inweta ọhụụ na nrọ banyere ọhụụ ọhụụ. Na Nọvemba ọ kwupụtara mkpughe banyere ịkwaga Gaspésie.
1977 (Fall): Thériault gwara ndị na-eso ụzọ ya ka ha kpọtụrụ ndị ezinụlọ ha ma na-atụ egwu ịmalite ịkpachasị njikọ niile ma ọ bụrụ na ha agaghị anabata amụma ya banyere ọhụụ na-abịanụ.
1978 (Jenụwarị): Thériault lụrụ Gisèle Lafrance na thebọchị Seventh Adventist Church na Montreal.
1978 (Machị): Geraldine Auclair, onye ọrịa leukemia, sonyeere Healthy Living Clinic mgbe di ya mere ka Thériault kuru ya, mana ọ nwụrụ n'oge na-adịghị anya.
1978 (April): A chụpụrụ Thériault na Chọọchị Seventh-Day Adventist.
1978 (June): Healthy Living Clinic bidoro ịgwa Theriault dị ka "Moise" (Moses) na iyi akwa a na-eme n'ụlọ na-enweghị akwa.
1978 (July 6): Thériault buru amụma na njedebe nke ụwa maka February 17, 1979.
1978 (July 9): Mgbe ha rutere Gaspé, ìgwè ahụ na-enyocha ọhịa, ma maa ụlọikwuu na ụkwụ nke ugwu ugwu nke Theriault kọwara dị ka "Mont de l'Éternel" dị nso na obodo New Carlisle, Quebec. Ndị otu a gbanwere aha ya "Ezigbo Ezigbo Ezinụlọ Moses" (HMMF) na ndị otu malitere ịkpọ Theriault dị ka "Moïse" (Moses).
1978 (Septemba 15): Roch Thériault mere ndị otu ya baptizim na aha ọhụrụ Bible iji gosipụta mbido ọhụrụ ha.
1978 (October): Thériault bidoro inwe mmekọahụ na ọtụtụ ụmụ nwanyị nke otu ahụ wee gbasaa alụmdi na nwunye niile ọ rụburu.
1978 (November 18): A kọrọ akụkọ ọdachi nke Jonestown na akwụkwọ akụkọ, ndị nta akụkọ malitere ịkọwa Jim Jim na Roch Theriault, na ịkọwa HMMF dịka "òtù nzuzo".
1978 (February 17): Amụma Thériault banyere njedebe nke ụwa dara. Ọ kọwara ọdịda a site n'ikwusa na oge Chineke na-arụ ọrụ dị iche na oge mmadụ. Ndi nne na nna nke Chantal Labrie choro ka ha nyocha nwa ha nwanyi.
1979 (March 18): Sûreté Québec rịdata na HMMF na usoro ikpe ụlọ ikpe maka Chantal Labrie, mana Thériault ekweghị ịbanye.
1979 (Eprel 18): Na-agbaso mkparịta ụka redio na Roch Thériault nke ọ tụlere amụma ya, ndị uwe ojii wakporo obodo HMMF iji mezuo iwu ụlọ ikpe banyere Chantal Labrie, bụ ndị ha ji ike duru gaa ụlọ ọgwụ maka nyocha ọgụgụ isi. A kpụpụrụ Thériault na ikpe maka ebubo nke igbochi ikpe ziri ezi. A mara ya ikpe ma maa ya ikpe ịkwụsị.
1979 (April 27): Theriault laghachiri n'obodo ahụ. Labrie, onye ọkà mmụta sayensị chọpụtara na ọ dị ezi ahụike uche, wee laghachi.
1979-1980 (July-August): Ezigbo Ezinụlọ Moses, ya na ụlọ ya ndị mara mma na uwe ejiji nke Akwụkwọ Nsọ, ghọrọ isi ihe nkiri ndị njem nleta na Gaspesie.
1979 (Ọktọba): Gabrielle Nadeau, ọrịa multiple sclerosis, nwụrụ n'agbanyeghị usoro ọgwụgwọ nke “Moïse”.
1980 (Nọvemba): Guy Veer, “onye dị mfe," sonyere obodo.
1981 (March): Samuel Giguère, bụ onye dị afọ abụọ, nwụrụ mgbe a nwụsịrị ya n'ụzọ na-eme ihe ike site na Veer na ọgwụ "ọgwụgwọ" nke "Moise."
1981 (Septemba 14): Moise siri ọnwụ na Guy Veer ga-ekpe ikpe n'ihu obodo HMMF maka igbu Giguère. Veer mara na ikpe mara ya na Theriault tụpụrụ ya ka "nsacha."
1981 (November 5): Veer hapụrụ ìgwè ahụ ma ndị uwe ojii gbochiri ya.
1981 (Disemba): Ndị uwe ojii wakporo obodo ahụ. E jidere Thérias, ma tinye ụmụaka ya niile na ọrụ nchekwa. E boro mmadụ asaa ebubo na ha so na ọnwụ Giguère na maka cast nke Veer.
1982 (Septemba): A mara ndị ikpe asaa a mara ikpe na ebubo niile. E zigara mmadụ atọ, gụnyere Thériault, n'ụlọ mkpọrọ na Québec City, mara ya ikpe site na ọnwa itoolu ruo otu afọ.
1982 (Disemba 23): Onye ọka ikpe Jean-Roch Roy zigara ndị otu HMMF akwụkwọ ịchụpụ.
1983 (January 18): Ndị otu na-ebi n'ime obodo ahụ kpochapụrụ ọhịa.
1984 (February): A tọhapụtara Thérias n'ụlọ mkpọrọ ma soro ndị na-eso ụzọ ya laghachi.
1984 (May 2): Thériary na ụmụazụ ya iri abụọ na abụọ hapụrụ Gaspé ma kwaga n'otu ala dị nso na Burnt River, nke dị na Kawartha nke Ontario. Ndị otu ahụ gụrụ onwe ya "Ant Hill Kids".
1985 (Jenụwarị 26): Nwa nwa Gabrielle Lavalee nwụrụ n'ihi oyi. Mgbe nwatakịrị ọzọ gbanahụrụ obodo ahụ wee bo ebubo mmejọ na mmejọ, ụmụaka itoolu amụrụ na obodo ahụ bụ ndị Ontario Children's Aid Society jidere ma debe ha n'ụlọ obibi.
1988 (Septemba 29): Otu n'ime ọtụtụ nwunye Theriault, bụ Solange Boilard, mere mkpesa maka afọ mgbu, ọ gabigara ọrụ ịwa ahụ obi ọjọọ na nke nwere nsogbu site na "Moise" mmanya na-egbu. Ọ nwụrụ ma lie ya ụmụazụ ya.
1988 (November 5): Theriault wepụtara ezé asatọ nke Gabrielle Lavallée iji taa ya ahụhụ maka ire ere achịcha dị ala.
1989 (May 23): Theriault ji aka mma ịchụ nta jide Lavallée n'aka iji gwọọ mkpịsị aka siri ike. Ọrịa ahụ malitere ibute ọrịa ma gbasasịa ọnya.
1989 (July 26) Thériault gwara Lavallée na ya ga-ebipụ aka ya, kama ọ na-egbutu ogwe aka ya dum na ịgbanye ígwè.
1989 (August 14): Lavallée gbapụrụ n'aka ụmụaka Ant Hill site na ijegharị n'ụlọ ọgwụ kacha nso ebe ndị uwe ojii gbara ya ajụjụ ọnụ.
1989 (October 6): E jidere Thériault ka ọ gachara izu ole na ole ịchụpụ ndị uwe ojii na-ezo n'ime ọhịa.
1989 (Disemba 18): E boro Thériault na igbu ọchụ nke abụọ nke Solange Boilard. Ọ mara ikpe igbu ọchụ na ebubo mwakpo kpụ ọkụ n'ọnụ maka ịkpụ aka Lavallée. A mara ya ikpe ịga mkpọrọ afọ iri na abụọ.
1993: Mgbe ọ nwụsịrị, ọ tụrụ Thériault mkpọrọ n'ụlọ mkpọrọ.
2000: E zigara Thériault n'ụlọ mkpọrọ na-eche nchebe na Dorchester, New Brunswick.
2002: Achọghị ngwa Thériault maka parole.
2011 (February 26): Thériault nwụrụ mgbe ọ dị afọ iri isii na atọ mgbe onye otu ya na ya nọ na-egbu ya, bụ Matthew Gerrard MacDonald (onye gburu ọchụ ikpe ibe ya) na Dorchester Penitentiary.
A mụrụ Roch Thériault na Mee 16, 1947 na obodo Rivière-du-Moulin, Quebec ma zụlite n'obodo dị nso na Thetford Mines. Nna ya, onye ọrụ ugbo, bụ onye òtù nke Pelerins de Michel ("Berets Blancs"), otu ndị Katọlik na-achọghị mgbanwe na-eguzosi ike n'ihe nye popu nke ga-emesị jụ mgbanwe nke Second Vatican Council (Kaihla na Laver 1994: 29). Little Roch ga-eso nna ya gaa nchịkọta ego site n'ụlọ ruo n'ụlọ iji kesaa akwụkwọ Beret Blanc. Mgbe ọ dị afọ iri na asatọ, Theriault jụrụ nzụlite Katọlik ya wee malite ịchọpụta ọdịmma onwe ya. O mechara kwuo na akụkọ ndụ ya edepụtara n'ụlọ mkpọrọ na a zụlitere ya na Abitibi, na mgbe ọ bụ nwata, ọ zutere nne na-agba nne n'ọhịa na-agbanye ya ma were ya dị ka nwa ya (Theriault 1983). Nna ya kuziiri ya ị tụ ezi, ọ wee nwee mmasị na ọgwụ ụmụ amaala shamanic. Na 1973, o tinyere aka na ebe obibi ndị mmụọ, ndị Aramis Association, ebe obibi ndị masonic na Thetford Mine ebe ọ na-ekwu na a kụziiri ya usoro nke hypnotism (Laflamme 1997: 50).
Thériault lụrụ Francine Grenier na 1967 ma nwee ụmụ nwoke abụọ, Roch-Sylvain (b.1969), na François (b.1971) bụ ndị nabatara ndị ọbịa na obodo ndị ọ na-elekọta na Gaspe na Ontario, ma mesịa dee akwụkwọ banyere ndụ ha na nna ha. Na 1974, ọ kwụsịrị mmekọrịta ya na Grenier, n'oge na-adịghị anya, ọ zutere Gisèle Lafrance mgbe ọ na-ere efere aka ya n'oge oyi Carnaval na Quebec City (Lavallee 1993: 13).
Thériary mepụtara afo ọnya afọ na 1970. Awara ya ma nke a kpatara nsogbu, nke mere ka ahụ mgbu ya n'oge ndụ ya niile ma mee ka mmasị ya dịkwuo mma (Laflamme 1997: 37). Na Fall 1976, ihe mgbu ahụ siri ike, ọ gbakwara aka ruo ọnwa ole na ole n'ụlọ a gbahapụrụ agbahapụ (Laflamme 1997: 63). Ya na Chọọchị Adventist Seventh (SDA) dị na Thetford Mines. N'ịbụ ndị nwere mmasị na mmemme ahụike na amụma ọdịnala Bible, ọ sonyere na Jenụwarị 1977. Otu ọnwa ka e mesịrị natara ọhụụ nke buru amụma banyere mgbuchapụ Jonestown. Ọ malitere ịrụ ọrụ dịka onye ozi ala ọzọ maka ndị Adventist Seventh, ma kwụọ ụgwọ iji ree akwụkwọ SDA ma kụziere ọmụmụ ihe na "nkwụsị" (esi kwụsị ise siga) na Thetford Mines na obodo ndị gbara ya gburugburu (Kaihla na Laver 1994: 57). N'oge okpomọkụ ahụ, Thériault zutere mmadụ ise n'ime ndị na-eso ụzọ ya n'ọdịnihu na ihe omume SDA ma gwa ha ka ha banye n'ime ụlọ ya na Gisèle Lafrance. Ha gwara ya na enyi ya nwanyị dịka "Papy" na "Mamy" (Theriault and Theriault 2009).
Thériault na Francine Grenier mechara gbaa alụkwaghịm ha na 1977. (Theriault na Theriault 2009: 45). Na Septemba, Theriault na ndị otu ya gara Sainte-Marie-de-Beauce, ebe ha zutere Jacques Giguère na nwunye ya, Maryse Grenier. Ka ọ na-erule Ọktọba ndị otu ahụ kwagara Sainte-Marie-de-Beauce na Giguère ga-abụ nwoke aka nri nke Thériault. N'ebe ahụ, ha guzobere ụlọ ahịa na-echekwa Clinique vivre en santé (Healthy Living Clinic, HLC) wee gaa n'ihu na-enye nkuzi detoxification na mpaghara Beauce, Lotbinière, Dorchester, Bellechasse (Kaihla na Laver 1994: 90). HLC nyere usoro ihe omume ụbọchị ise dabere na nri ahụike, nyocha nke uche na ọgwụgwọ otu (Kaihla na Laver 1994: 87). Ylọọgwụ Ahụike Ahụike nwetara aha ọma na mpaghara maka ịnabata oriri oriri anaghị eri anụ maka ndị ọrịa, ndị ogbenye na ndị nwere nkwarụ. Thériault nyere ndị na-eso ụzọ ya iwu nke Sabbatarian nke chọrọ ibu ọnụ, ekpere, ntụgharị uche na nkwupụta otu (Kropveld na Pelland 2006) ..
Na Fall 1977, Thériary malitere ịkọ na ọhụụ na nrọ banyere ọhụụ dị nso. Na November, ọ nwetara nkpughe banyere ịkwaga Gaspésie. Ọ gwara ndị na-eso ụzọ ya ka ha kpọtụrụ ndị ezinụlọ ha ma kpachapụrụ anya nkekọ na ndị ikwu ha nabataghị amụma amụma ya (Lavallée 1993: 106-08). A na-elekwasị anya n'ịmụ Bible na nkwupụta otu.
Thériault na Gisèle Lafrance lụrụ na Ụbọchị Seventh Day Adventist Church na Montreal na ọ malitere ịhazi ma na-elekọta ndị di na nwunye n'etiti ụmụazụ ya (Lavallee 1994: 91). Na 1978, onye ọrịa na-arịa ọrịa leukemia rutere n'ime Ahụike Ahụike Ahụike, mana ọ nwụrụ n'oge na-adịghị anya (Lavallée 1993: 88). Mgbe ọ na-anwụ anwụ, Thériault kwuru na ya ga - eji ndụ "ndụ ndụ" gbakee ya obere oge ka ọ nwee ike ikwu okwu ikpeazụ ya (Kaihla na Laver 1994: 96).
Na April 1978, a chụpụrụ Thériault site na Chọọchị Seventh-Day Adventists maka ikwusa ozi ọma ndị a (Kaihla na Laver 1994: 97). Na June 1978, ọ kọwara ọhụụ ọ natara na nke otu nọ na-eguzo n'okpuru ugwu, nke ọ maara na ọ nọ na Gaspé Peninsula nke dị n'ebe ọwụwa anyanwụ Québec (Laflamme 1997: 75). N'oge na-adịghị anya, ndị òtù HLC ahụ malitere ịgwa Theriault dị ka "Moise" (Moses) na iyi akwa ejiji na-enweghị ebe obibi na-enweghị uwe (Laflamme 1997: 76). Ka ọ na-erule n'ọnwa June, ìgwè ahụ ahapụwo Gaspé, na-akwado onwe ha site n'ịchụpụ ịṅụ sịga na obodo ndị dị n'akụkụ ebe ndịda nke ọdọ mmiri Saint Lawrence. Na July 6, Thériault buru amụma na njedebe nke ụwa ga-eme na February 17, 1979 (Kaihla na Laver 1994: 101).
Mgbe ha rutere Gaspé, ìgwè ahụ kwagara n'ọhịa, ma maa ụlọikwuu na ụkwụ nke ugwu nke Theriault kpọrọ "Mont de l'Éternel," ebe nchekwa ha na apocalypse na-abịanụ, na nso obodo New Carlisle, Quebec. A gbanwere aha otu ahụ "Ezigbo Ezigbo Ezinụlọ Moses" (HMMF), a ga-akpọkwa Theriault dị ka "Moïse" (Moses). Menmụ nwoke wuru nnukwu chalet na osisi log n'ọhịa. Na Septemba, Roch Thériault mere ndị otu ya aha ọhụrụ nke Akwụkwọ Nsọ iji gosipụta aha ọhụrụ ha dịka Ndị Chineke Họpụtara bụ ndị ga-alanahụ mbibi site na ịchọta ebe obibi na "Mont de l'Éternel." Ka ọ na-erule ngwụsị oge ọkọchị, mmadụ asaa hapụrụ ìgwè ahụ, gụnyere ụmụ nwoke abụọ Thériault laghachiri nne ha, Francine Grenier (Lavallée 1993: 111-12).
Ka ọ na-erule Ọktọba 1978, Thériault amalitela inwe mmekọrịta nwoke na nwanyị na ọtụtụ ụmụ nwanyị nọ na otu ya, wee gbasaa alụmdi na nwunye niile ọ rụburu (Lavallee 193: 105). Otu n'otu, ụmụ nwanyị ọ bụla nọ n'ìgwè ahụ ghọrọ nwunye ya di ọtụtụ, ma e wezụga Maryse Grenier, nwunye nke Jacques Giguere (Kaihla na Laver 1994: 110). Thériault mebiri SDA taboos megide iri anụ na ị drinkingụ mmanya na-aba n'anya, na-ewepụrụ onwe ya. Ndị otu ahụ mepụtara ngwa ọhụrụ nke Kalịnda Hibru, yana ụbọchị Afọ Ọhụrụ malite na Machị 21.
Mgbuchapụ ahụ na Jonestown na November 18, 1978, mere ka ndị mmadụ na-elebara ndị na-eso ụzọ Mozis anya dị ka "òtù nzuzo". Ndị gọọmentị Canada natara ngwa ngwa iji chọpụta ntinye aka n'etiti Jim Jones na Thériault, ọ bụ ezie na n'oge a, ọ dịghị ihe ọjọọ (ọha na eze) mara na Ezinụlọ Ezigbo Moses. Ikekwe, nke a, na December 1978, ìgwè ndị Thériault nwere ọtụtụ ọsọ ọsọ na steeti. Ndị agha France abụọ, di ọhụrụ Gabrielle Lavallée na enyi ya nwanyị ochie, jidere ndị uweojii Royal Canadian Mounted Police ma jiri ike laghachiri na France n'ihi nlezianya ezughị ezu. Ndị otu, nke dị iri abụọ na atọ mgbe ha rutere Mont de l'Éternel, hapụrụ mmadụ iri na ise (Lavallee 1993: 139).
Esemokwu malitere mgbe a gbara Thériault na Claude Ouellette ajụjụ ọnụ na Radio Canada na Disemba 11, 1978. Ha sooro ụlọ wee jide Sûreté du Québec wee mee ha nyocha psychiatric n'ụlọ ọgwụ dị na Québec City. Twobọchị abụọ ka e mesịrị, a tọhapụrụ Ouellette na Thériault na akwụkwọ nlekọta ahụ ike dị ọcha: A sịrị na Thériault nwere "echiche aghụghọ," nke nwere ike igosi schizophrenia, mana ndị ọkà n'akparamàgwà mmadụ echeghị na ọ dị ize ndụ (Kaihla na Laver 1994: 108 ).
Ndị mgbasa ozi na-elekwasị anya na mgbaghara ọdịda nke Thériault, na-atụ aro na "Ezigbo Ezinụlọ Moses" nwere ike ịmalite igbu onwe ya. Na-atụ egwu na akụkọ mgbasa ozi na-adịghị mma na gọọmentị nwere ike ịmetụta gọọmentị ma chụpụ ha n'ala ha, Thériault na Ouellette gawara Quebec City na Machị 7, 1979 iji zute otu onye ọrụ gọọmentị nke mesiri ha obi ike na ha nwere ikike ịzọ ụkwụ na ụkwụ Mont de l'Éternel, nke bụ okpueze ala (Laflamme 1997: 97).
Na Jenụwarị 1979, a mụrụ ụmụ atọ n'ime obodo ahụ. N'ime afọ iri na abụọ sochirinụ, a ga-amụba ụmụ iri abụọ n'ime otu site na ụmụ nwanyị ise. Nanị ma mmadụ abụọ n'ime ụmụ ndị a bụ ndị Roch Theriault mụrụ (Laflamme 1997: 96).
Ụbọchị dị nkpa nke amụma nke njedebe nke ụwa na February 17, 1979 gafere n'ezoghị ọnụ. Ihe a na-eme na-adabere na ọdịda ndị na-eso ụzọ ya site na ikwusa na oge Chineke na-arụ ọrụ dị iche na oge mmadụ (Lavallée 1993: 441). Ndị nne na nna nke Chantal Labrie zaghachiri n'omume na-adịghị mma site na ịrịọ nyocha ọzọ banyere nwa ha nwanyị (Lavallée 1993: 81). N'ọnwa March, Sûreté Québec rutere na mkpanaka HMMF na iwu ikpe ụlọ maka Chantal Labrie, mana ndị Thériault nabatara ha.
Mgbe ya na Roch Thériault gbara ụka na-ekwu okwu banyere amụma ya, ndị uweojii gbara aka na HMMF na April 18 iji mee ka usoro iwu ụlọikpe gbasara Chantal Labrie, bụ ndị ha jidere ma duru ha gaa n'ụlọ ọgwụ maka nnyocha nyocha. A kpọgara Thérias na ndị na - eso ụzọ atọ n'ọdụ ndị uweojii ma jidere ha maka ịjụ ajụjụ. Mgbe a na-edebe ya, ndị uweojii ndị uweojii na-abanye ndị nne na nna ndị ọzọ na-agba mbọ ime ka ụmụ ha tozuru etozu hapụ ìgwè ahụ (Kaihla na Laver 1994: 118). A boro Constonia ebubo na ọ na-egbochi ikpe ziri ezi maka inupụrụ iwu ikpe ụlọikpe. Theriault kwetara ịgbaso nyocha nke uche uche. Nsonaazụ ahụ kwuru na ọ na-enwe "mgbaasị ụgha" ma gosipụta ihe ịrịba ama nke ịme ihe. E weere ya na ọ gaghị ekwesịrị iguzo ikpe ma zigara ya n'ụlọ ọrụ psychiatric na Quebec City. Otú ọ dị, otu nyocha abụọ nke psychiatric ga-agbagha ihe nchoputa dị na akụkọ mbụ, nke mere na a kpọpụtara Thériault na ebubo nke igbochi ikpe ziri ezi. A mara ya ikpe mara ma nyefee ya ikpe. Ya na Chantal Labrie laghachiri HMMF site na njedebe nke April (Kaihla na Laver 1994: 119).
N'oge ezumike nke 1979 na 1980 Ezinụlọ Ezigbo Moses, ya na ụlọ ndị na-eme njem nlegharị anya ya na ihe nkiri oge ochie ghọrọ ihe nleta ndị njem nleta na Gaspesie, na-adọta na 75 ka ndị njem nleta na-aga kwa ụbọchị, na-anọ ọtụtụ abalị (Kropveld na Pelland 100). N'oge a nke ọganihu, a na - ekwe ka ndị òtù ahụ ṅụọ mmanya. (Laflamme 2006: 1997) Ma mgbe ahụmahụ nke ọdịda amụma, na October October 100 site n'ọnụ ọnwụ Gabrielle Nadeau, ọrịa ọrịa sclerosis ọtụtụ ndị bi n'obodo ha , Ajuju onyinye amara nke Thériault dika onye amuma na mmuo ime mmuo (Kaihla na Laver 1979: 1994). Oge ime ihe ike na esemokwu megide iwu ahụ.
Guy Veer, nke a maara na commune ahụ dị ka "onye na-adịghị mfe," sonyeere obodo ahụ nso nso a. Na Machị 1981, ọ bụ ya kpatara ibi ndụ ụmụaka "adịghị ọcha" ebe ndị "dị ọcha" na-eme ọbịbịa nke ụmụ nwoke abụọ nke Theriault site na ịnwe nnukwu oriri maka nsọpụrụ ha. Ka ọ dị ugbu a, Samuel Giguère dị afọ abụọ jụrụ oyi ma agụụ na-ata ya ahụhụ site na iti ihe n'ụzọ Veer. Theriault gbalịrị ịgwọ ọnyá Samuel site na ememe "ọgwụgwọ" anwansi gụnyere ịmịnye afọ na ịwa ugwu, nke dugara ọrịa na ọnwụ (Kaihla na Laver 1994: 124).
Na September 14, 1981 Thériary siri ọnwụ na Guy Veer ga-ekpe ikpe tupu obodo HMMF kpatara ọnwụ Samuel Giguère. A mara ya ikpe. Akpata ahụhụ dị egwu site n'ịchụpụ ya, lee dị ka "dị ọcha" ma gwa ya na a na - akwalite ya ugbu a site na ọrụ nke "Slave" ruo n'ọkwá dị elu nke "Eunuch." Veer wee gbapụ na obodo ahụ, ndị uweojii na - onye rịọrọ maka akaebe ya (Kaihla na Laver 1994: 126).
Na December 1981 tndị uweojii na-ebuso obodo ahụ agha. E jidere Thériary ma jide ụmụaka niile ma debe ha na ọrụ nchekwa. A gbara ndị mmadụ asaa ebubo maka ọnwụ ha na Samuel Giguère na caster nke Veer, tinyere Gabrielle Lavalee bụ onye a zụrụ dịka nọọsụ. Site na September 1982, a mara ndị niile ikpe niile. E zigara mmadụ atọ na ụlọ mkpọrọ na Quebec City, nwere ahịrịokwu site na ọnwa itoolu ruo n'afọ (Kaihla na Laver 1994: 128).
Ka ọ na-erule December 1982, ndị òtù HMMF natara akwụkwọ mgbasa ozi na onyeikpe Jean-Roch Roy. Site na Jenụwarị 18, 1983, ndị niile na-ebi na HMMF bụ ndị na-ahụ maka ọhịa.
A tọhapụrụ Thériault n'ụlọ mkpọrọ na February 1984 wee soro ndị na-eso ụzọ ya iri abụọ na abụọ guzosie ike; ndị ikom atọ, ụmụ nwanyị itoolu na ụmụaka iri. Na Mee 2, 1984 ha hapụrụ mpaghara Gaspé ịga ọdịda anyanwụ na mpaghara Ontario. N'ebe ahụ, ha chọtara otu ala dịdebere Osimiri Burnt, na mpaghara Kawartha nke Ontario. Ha wuru ulo oru ohuru n'ime ime uzo di ohia (Kaihla na Laver 1994: 146). Mgbe ha rutere Ontario, ha tinyere akwụkwọ maka enyemaka ọdịmma nke mpaghara ahụ, mana a jụrụ ha. Ha malitere ịzụrụ aka na ịnara aka n'aka ndị agbata obi ha ka ha na-arụ ọrụ ugbo (Kaihla na Laver 1994: 151). E guzobere ụlọ osisi "Ant Hill Kids" na ebe a na-eme achịcha, ndị otu ahụ wee malite ire achịcha na achịcha ụlọ n'ụlọ site n'ụlọ ruo n'ụlọ na n'ahịa ndị ọrụ ugbo mpaghara. A tụfuru aha HMMF maka aha ọhụrụ ahụ, "Ant Hill Kids".
Na Jenụwarị 26, 1985, nwa nwoke Gabrielle Lavalee nwụrụ n'ihi oyi. Okwesiri autopsy kwubiri na obu ihe onodu mberede nke onwu umuaka. N’oge na-adịghị anya, nwatakịrị gbara ọsọ mgbe a kụrụ ya ihe, ndị ọrụ nchekwa ụmụaka jidere ya. Ọ gwara ndị uwe ojii na "Moise" [Theriault] metọrọ ya n'ụzọ mmekọahụ. Ntmụaka Ontario Children's Aid Society (OCAS) jidere ụmụaka itoolu nke obodo ahụ wee debe ha n'ụlọ obibi.
Omume ime ihe ike nke Theriault na-arịwanye elu mgbe otu ahụ kwagara Ontario. Ahụhụ anụ ahụ nke ndị otu gara n'ihu, na Thériault bidoro ịwa ahụ ahụike mmụọ ọjọọ, nke ọ gụrụ dị ka ọgwụgwọ anwansi.
Na September 29, 1988 otu n'ime "Moise si ”otutu nwunye, Solange Boilard, onye ghọrọ ya isi nwunye, si otú displais Gisèle Lafrance, mere mkpesa nke a afo mgbu. Theriault, na mmanya na-egbu mmanya, gara n'ihu ịwa ahụ site na iwepu eriri afọ ya ma kwupụta na ọ gwọrọ. Ọ nwụrụ n'ụzọ na-egbu mgbu ma na-agbaso iwu ya, ndị otu ahụ liri ya, mana gwupụtara ozu ya ụbọchị ole na ole gachara. Moise na ndị na-eso ụzọ ya na-eduzi ọtụtụ usoro anwansi mmekọahụ na mbọ iji mee ka Boilard dịghachi ndụ. Ha wepụrụ ya ugboro atọ tupu e lie ya. Mozis debere otu ọkpụkpụ Boilard n’elu eriri n’olu ya, zoo ya n’ajị agba ya. O kwusiri ike na ndị na-eso ụzọ ya na-eyikwa ọkpụkpụ Solange n'olu ha dịka ọta. Ndị otu, bụ ndị ụjọ na-atụ ụjọ nke iwe ya, malitere ịhapụ nzukọ ahụ ruo ọtụtụ izu n'otu oge tupu ha alaghachi, na-echekarị ntaramahụhụ (Kaihla na Laver 1994: 226) ..
Na November 5, 1988 Moise weputara ezé Gabrielle Lavallee asatọ iji taa ya ahụhụ maka ire ere achịcha dị ala. Otu n'ime ndị nwunye ya kachasị amasị ya, nke a na-ewere dị ka "Impure," Lavallée gbapụrụ n'obodo ahụ, mana ọ laghachiri na-ata ahụhụ karịa. Na May 23, 1989 Gabrielle Lavallée laghachiri ileta nwanne ya nwoke. N'ịchọpụta ọkwa na otu mkpịsị aka ya siri ike, Theriault nyere ya iwu ka ọ gosi ya, wee jiri mma ịchụ ntara ya maa aka ya na mberede. Ọrịa ahụ butere ọrịa ma ghọọ gangrenous (Kaihla na Laver 1994: 265).
Ka ọ na-erule July 26, 1989 Thériault kpebiri na oge eruola ka bepụ aka Lavallée, kama nke ahụ, kpọọ ndị na-eso ụzọ ya ka ha jide ya, o jiri aka olu gbajiri aka ya niile (Lavallée 1993: 279). Lavallée kpebiri izo uwe ya wee mee atụmatụ ịhapụ otu ahụ. Ka ọnwa nke asatọ dị na mkpụrụ ụbọchị asatọ, ọ gbapụrụ na ngagharị nke ụmụaka Ant Hill site na ịga njem gaa ụlọ ọgwụ kacha nso ebe ndị uwe ojii gbara ya ajụjụ ọnụ. Mgbapụ ya na nchọpụta sochirinụ kpatara oke mmeri site na obodo ahụ. Thériault zoro n'ọhịa ruo ọtụtụ izu wee gbanahụ ndị uwe ojii na-achọ ya site na iji ndị nkịta na helikopta. N'ikpeazụ, na October 14, 6, e jidere Thériault ma bo ya ebubo na igbu ọchụ nke abụọ nke Solange Boilard. Ọ mara ikpe igbu ọchụ na ebubo mmejọ kpụ ọkụ n'ọnụ maka ịkpụ aka Gabrielle Lavallée. A mara ya ikpe afọ iri na abụọ n'ụlọ mkpọrọ (Lavallée 1989: 1993).
Mgbe o kwusịrị arịrịọ, na 1993, a tụrụ Roch Thériault ikpe maka ndụ n'ụlọ mkpọrọ. Ndị nwunye ya, Francine Laflamme, Chantal Labrie na Nicole Ruel kwagara New Brunswick ka ha nwee ike ịnọgide na-eso nna ha ukwu ime mmụọ, "Moise," ka a tụrụ ya mkpọrọ. Ndị nwunye atọ ahụ mụọ ụmụ anọ dị iche iche bụ ndị amụrụ ime mgbe ha na-aga ileta ụlọ mkpọrọ. Umu umuaka abuo ejiri umuaka umuntakiri umuntakiri jiri ngwa ngwa weputara ha (Ochichi 2002).
Na 2000, a kpọgara Roch Thériault na ụlọ mkpọrọ nchebe na Dorchester, New Brunswick. Afọ abụọ mgbe nke ahụ gasịrị, o tinyere akwụkwọ maka parole, ma a jụrụ ya.
Theriault gbalịrị ire ihe osise ụlọ mkpọrọ ya, uri na ihe eji eme ya, ọkachasị "mkpanaka Moses" na weebụsaịtị websaịtị United States, MurderAuction.com na 2019. Nke a kpalitere esemokwu ndị ọzọ nke ndị mgbasa ozi na-akwado. Mịnịsta na-ahụ maka Ọha Ọha na Canada, Stockwell Day, degara ndị ọrụ Correctional iji gosipụta nchegbu ya na-ekwe ka onye na-egbu mmadụ rite uru na mpụ ya. Ọrụ Correctional nke Canada wee gbochie ọrụ nka nke Theriault ịhapụ ụlọ ogige Dorchester Penitentiary (Bussières 2010).
Na February 26, 2011, Roch Thériault bụ onye na-agụ ya, Matiu Gerrard MacDonald (nakwa onye gburu mmadụ ikpe), na ụlọ mkpọrọ Dorchester (Cherry 2011). Ọ nwụrụ mgbe ọ dị afọ iri isii na atọ.
Okpukpe okpukpe Roch Thériault pụtara na ndị Adventist Seventh (SDA) na Thetford Mines, Quebec. Mgbe a chụpụrụ ya na SDA ụka, òtù ya nọgidere na-enwe ọtụtụ n'ime ndị mbụ Adventist. Ha nọgidere na-eri nri onye anaghị eri anụ na-enweghị mmanya dịka ụzọ isi 'nweta ahụ ike zuru oke.' Ha nọgidere na-eche Adventist anya na atụmanya puku afọ, nke amụma nke Thériault buru amụma, ya bụ, amụma ya na ụwa ga-agwụ na February 17, 1979. Ha na-echekwa na SDA na-adabere na kalenda ndị Juu maka ọnwa maka ememe ha, na Saturday ka ụbọchị izu ike ha. Theriault, onye nna ya bụ onye Katọlik na-emekọ ihe ọnụ, jụrụ chọọchị Katọlik nke Quebec, ma kwatuo Agba Ọhụụ na ọnọdụ dị nsọ nke Jizọs na Nwaanyị Mary (Theriault na Theriault 2009: 36-37).
Nkwenye kachasị nke ụmụazụ ya yiri ka ọ nọ na Roch Thériamb n'onwe ya; dị ka onye amụma Chineke họọrọ bụ onye natara nkọwa ndị na-aga n'ihu. Site n'ikwu na ọ bụ "Moosa," onye ọhụụ ime mmụọ oge ochie nke onye amụma Hibru Agba Ochie, o nyere ndị na-eso ụzọ ya ihe dị nsọ nke "ụmụ Izrel" oge ochie bụ ndị a kpọpụtara n'Ijipt na ịgba ohu. Ihe omuma a mere ka ndi mmadu na ndi ozo di ndu, dika edere ya n'akwukwo nke ndi gara aga. Ndi mmadu n'èzí bu "Ijipt," na "ohu" nke ndi Israel bu uzo, "nsogbu, olu, na nsogbu" nke ndu ugbua. Thériary nyere "ihe akaebe" mgbe nile site n'inye ya nrọ ya, ọhụụ ya na amụma ya banyere mbibi nke na-abịanụ nke ụwa, nakwa site na obere ọrụ ịgwọ ọrịa. Dị ka ihe gbasara okpukpe maka ịlụ karịa nwanyị, Roch Thériault ga-ezo aka na ndị amụma n'Agba Ochie, Abraham, Solomọn, Jekọb na Aịsaịa, bụ ndị nwere ọtụtụ nwunye (Kropveld na Pelland 2006).
Mgbe a chụpụrụ Thériault site n'okpukpe SDA na April 1978, ìgwè ahụ laghachiri n'oké ọhịa Gaspé. N'ebe ahụ, onye ọ bụla nọ na-eme ememe aha. Nke a gụnyere ide ede Hibru n'asụsụ dị iche iche, bụ nke Thériault si na okpu wee nye onye nke ọ bụla. Nke a gosipụtara nlọghachi onye ọ bụla n'ime ìgwè ahụ.
E kwuru na aha ndị otu agbụrụ iri na abụọ nke Israel, na-egosi ngbanwe nke njirimara ha dịka "ụmụ Chineke" bụ ndị ga-adị ndụ na apocalypse (Laflamme 1997: 90).
A na-eme ememe ọhụrụ nke "ndị Juu", bụ ebe ofufe ọdịdị na-emeri Iso Ụzọ Kraịst n'ịgha mkpụrụ na n'oge owuwe ihe ubi nakwa n'oge oyi / okpomọkụ solstices. A na-eme ememe ọpụpụ kwa afọ na ụbọchị ọbịbịa nke gas na Gaspé.
Nkwupụta dị iche iche nke otu bụ ihe dị mkpa n'ime ìgwè ahụ. N'ime ụbọchị ndụ ahụike dị mma, ndị a lekwasịrị anya na ndị na-etinye aka na ọgwụ ọjọọ na nsogbu uche. Mgbe e mesịrị, n'oge oge HMMF, ikwupụta nkwupụta nke otu na-ekwu banyere mmehie na ịme iwu iwu. Mgbe ha bi na Sainte-Marie, ìgwè ahụ ga-ejide nri ndị anaghị eri anụ maka ndị ọrịa na ndị ogbenye. Nri ndị a ga-apụta ịbụ ngosipụta nke ịdị nsọ nke ìgwè ahụ, dịka ndị nzọpụta maka ndị nkịtị.
Theriault ga-eme oge ememe ọgwụgwọ na-agwọ ọrịa, dịka mgbe ọ nọ na ala na-enweghị nsogbu. Nchọgharị ya na-ezighị ezi na ịwa ahụ mmụọ na-akpata ọnwụ ma ọ bụ nhụjuanya nke ọtụtụ n'ime ndị na-eso ụzọ ya.
Ndị otu ahụ nọ na mpaghara ha na-elekọta mmadụ, ma biri na log log na ebe obibi kachasị na mkpochapụ ọhịa. Thériault bụ nwanyị polygamist, lụrụ nwanyị niile nọ n'ìgwè ahụ, ndị bụbu ndị bụ di biri ndụ dị ka ndị mọnk na-aga agha. E wezụga ikike nke a, Jacques Giguère, bụ onye bi na otu nwanyị na nwunye ya, Maryse, ka e wepụrụ ihe a. Mgbe alụmdi na nwunye bịarutere na-erugharị nke ụmụ. Akpọrọ ụmụaka ahụ site na nne na nna ha mgbe izu ole na ole gasịrị ka onyeisi nwunye Thériault na Queen Queen, Gisele Lafrance zụlite ha, mgbe mgbe ha anaghị ahụkwa nne na nna ha maka izu ma ọ bụ ọnwa n'otu oge. Ozugbo e guzobere usoro mgbasa ozi abụọ na Ontario, a ga-ekewa ụmụ ahụ na "ndị isi" ndị bi na Theriault na "ndị ohu" na ndị nne ha "adịghị ọcha."
Na 1978, dịka "Ndị A Họpụtara," ndị òtù malitere ịwụ uwe akwa linin; green green for men and green green (na-enweghị uwe) maka ụmụ nwanyị, iji gosi ịdị umeala n'obi na nhata. Theriault na ụmụ ya ndị okenye abụọ jikwa ejiji na-acha odo odo, nke a na-eji akwa mma. Uzo nke otu a gbanwere site n'ịbụ "ebo" nke oge ochie ka a na-eme ya n'ụlọikpe nke oge ochie, na Thériault dị ka "Eze," nwunye ya bụ Lafrance, dịka "Queen," na Guy Veer dịka "nzuzu" na emesia "Eunuch".
Site na oge ha kwagara Ontario ma kpọọ ya Ant Hill Kids, ụkọ ahụ amalitela usoro abụọ. Ndị òtù nke Thériault hụrụ n'anya dị "ndị dị ọcha," ebe ndị ọzọ na-ewere dịka "ndị na-adịghị ọcha." Ndị na-eso "ndị na-adịghị ọcha" nwere nsogbu ụlọ obibi, ụkọ nri na ihe na-adịghị mma, ọrụ na-achọsi ike. "Ndị dị ọcha" bi nso "Eze na Queen" ma soro ha oriri oriri.
N'oge mbụ, Thérias dọtara ndị na-eso ụzọ ya site na klas ọmụmụ Bible ya, bụ nke nọgidere dị ka Thériaud kọwara amụma ndị dị na Bible. Ma nke nta nke nta, amaokwu Bible nyere okwu okwu nke Thériaud, juputara n'echiche ya, nrọ, na ọhụụ.
N'akụkọ ihe mere eme ha, ìgwè ahụ na-eche ọtụtụ ihe isi ike mgbe ụka SDA chụpụrụ Theriault ma wepụ nkwado ego ya. Ọnọdụ dị ndụ na ụkọ nri bụ ihe ịma aka na-aga n'ihu. Ọnọdụ ndị a ka njọ site n'aka ndị isi obodo na-ezighị ezi na site na Theriault na-eme ihe ike na-enweghị atụ. Ọnụ ọgụgụ nke Thériault, bụ nke si n'agbata iri na ise ruo iri abụọ na abụọ ndị toro eto na-agbanwe agbanwe ọnụ ọgụgụ nke ụmụ, pụtara na ọ na-adịghị ike nrụgide ndị ọzọ na-enwekwa ike ịchịkwa "Papy," Roch Thériault.
Ndi otu nne na nna choro ka ndi otu a choo iji zoputa umu ha nwanyi site na Theriault. Akụkọ mgbasaozi Sensationalistic na-agbaso amụma amụma oge ikpeazụ nke Theriault's. Nke a kpalitere mkpuchi ndị nne na nna na-amụba na 1978 mgbe ndị nne na nna nke nwa agbọghọ Chantal Labrie, na-eche na ọ kwụsịrị ịbanye na mahadum mgbe ọ banyere n'ime ezinụlọ Theriault, nwetara usoro ikpe ụlọikpe maka nyocha nke uche. Ndị nne na nna ndị ọzọ na-abanye n'obodo ahụ site na helikopta iji gbanye ụmụ ha ịhapụ. Ọnọdụ ndụ dị ndụ na njedebe na-akpata ọnwụ nwatakịrị, nke dugara n'enyemaka nke ndị na-elekọta mmadụ na-ejide ụmụ ha mgbe ụfọdụ. Mgbochi a mpụga ahụ mere ka ndị mmadụ kwụsị ịhapụ mmadụ na nhọrọ ị ga-anọpụ iche n'ebe ndị dịpụrụ adịpụ nke Quebec na Ontario.
Ihe ịma aka kasịnụ n'ìgwè ahụ bụ mmụba na-arịwanye elu nke ememe "ọgwụgwọ" nke Theriault. Ndị na-eso ụzọ Theriault gbara àmà ma mee ka o gbuo ya na nwunye ya na-ahụghị ya n'anya nakwa na ọ na-atụgharị uche na mmadụ atọ ọzọ. Ha jikọtara ọnụ na ịkọghị ma na-enyere ya aka ikpuchi mpụ ya. Ime ihe ike na-arị elu na-eduga ná mmeri na nchọpụta ndị uwe ojii mere ka ndị òtù Theriault pụta na mkpochapụ nke òtù ahụ.
Foto # 1: Roch "Moise" (Moses) Thériault.
Foto #2: Thériault na ndị inyom nke Moses Mountain Family.
Image #3: Thériault na Ezigbo Ezigbo Ezinụlọ.
Bussières, Ian. 2010. "le Roch 'Moïse' Thériault: quand le mpụ paie. ” Le Soleil, mai 15.
Cheery, Paul. 2011. "Cult ndú ama 'aja nke ya n'oge gara aga'." Thériault na-awakpokarị ndị mkpọrọ ndị ọzọ: onye ọka iwu. ” Montreal Gazette, February 28.
Na-enweta, K. 2002. "Sur la trace de MoïseThériault Ụmụ nwanyị atọ na-agbaso mgbe niile Leur Maître." Akwụkwọ Quebec: 2-3.
Kaihla, Paul na Ross Laver. 1994. Mesaịa ahụ siri ike. Toronto: Seal Books / McClelland Bantam.
Kropveld, Michael na Marie-Andrée Pelland. 2006. Phenomena Cult. Nweta site na: http://infosect.freeshell.org/infocult/phenomene/English/HTML/doc0007.htm na 15 February 2019.
Laflamme, Francine. 1997. Roch Thériault dit Moïse. Obodo Quebec: Stanké.
Lavallée, Gabrielle Lavallée. 1993. L'alliance de la brebis. Montreal: Edition JCL.
Thériault, Roch. 1983. L'Affaire Moïse: La montagne de l'Éternel. Obodo Quebec: Editions du Nouveau ụwa.
Thériault, Roch-Sylvain na François Thériault. 2009. Frères de sang: Les fils de Moïse. Montreal: Éditions LaSemaine.
Mesaịa ahụ siri ike (Film film). 2002. Nweta site na https://www.imdb.com/title/tt0303010 na 15 February 2019.